Zidle Decapsulator idala umoya jet yokuguqula umoya 4-5bar zixinaniswe ezilungiselelwe ngaphandle mthombo umoya eliphezulu rhoqo cleaner idaleka. I eliphezulu-rhoqo umoya idaleka ngokuqhubekayo kutsalela njengezingxobo egumbini ukusebenza kwisithuba sexesha elithile. Ngenxa yoko, njengezingxobo bazahlule ngcembe; powder okanye zithutha ngaphakathi kuwa phantsi waya umphanda. Ngenxa imikhosi bhetyebhetye endaweni imikhosi mechanical, amaqokobhe philisi Asifuni ngokupheleleyo; akukho Isiqwenga wadala kule nkqubo.
Okulandelayo: Philisi Checkweigher CMC-1200